Ny iPhone dia milaza hoe 'Tsy misy serivisy' Ity ny vahaolana farany! - Hafa
maninona ny iphone-ko tsy afaka mifandray amin'i iTunes
ahoana no ahafahanao manamboatra iphone misy fahasimban'ny rano
Ahoana ny fomba hampijanonana ny iphone tsy hihena ny iOS 11
Ny iPhone-ko milaza hoe 'Tsy misy serivisy' Ity ny vahaolana farany!
Mi Iphone Dice Sin Servicio Aqu Est La Soluci N Definitiva
Ny iPhone dia milaza hoe 'Tsy misy serivisy', tsy afaka miantso na mandray antso an-tariby ianao, mandefa hafatra an-tsoratra na mifandray amin'ny Internet raha tsy mampiasa Wi-Fi ianao. Mora ny manadino ny maha-integral antsika iPhones lasa eo amin'ny fiainantsika, mandra-pahatongan'ny tsy mandeha. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona ny iPhone no miteny hoe Tsy misy serivisy Y hasehoko anao ny fomba hamahana ilay olana .
Fa maninona ny iPhone no milaza fa tsy misy serivisy?
Ny iPhone dia mety miteny hoe Tsy misy serivisy noho ny olan'ny rindrambaiko, ny olana momba ny fitaovana, na ny olana amin'ny drafitry ny findainao. Mampalahelo fa tsy misy vahaolana tokana an'ity olana ity, ka handeha aho isaky ny mandeha amin'ireo vahaolana samihafa hitako fa tena nandaitra rehefa niasa tao amin'ny Apple aho.
Raha eo an-tampon'ny tendrombohitra ianao, angamba te hiverina amin'ny fiaraha-monina alohan'ny hanohizana. Raha tsy eo amin'ny toerana mety ho sarotra ny mahazo ny famantarana, dia alao ny iPhone tsy hiteny hoe Tsy misy serivisy mandrakizay.
1. Zahao amin'ny mpamatsy anao ny momba ny kaontinao
Ny orinasan-telefaona tsy misy tariby dia manafoana ny kaontin'ny mpanjifa noho ny antony maro samihafa. Naheno aho fa nisy tranga nanatonana iPhones satria: miahiahy ny asa hosoka ilay mpandraharaha, nahemotra ny karaman'ny mpanjifa, ary na dia noho ny vady aza tsy afa-po. Marina tsy te hihaino ny taloha izy ireo.
Raha toa ka mety aminao ny iray amin'ireto antony ireto dia antsoy ny mpamatsy anao mba hahazoana antoka fa milamina ny zava-drehetra. Ny iPhone-nao dia hiteny hoe Tsy misy serivisy raha najanona ny kaontinao, ary io no antony iraisana (saingy mora tsinontsinoavina) noho io olana io.
Raha hitanao ny olana Tsy misy serivisy izany ateraky ny mpanome tolotra telefaoninao, jereo fitaovana fampitahana ny drafitra ataoko hianaranao ny fomba ahafahanao mitahiry dolara an-jatony isan-taona amin'ny fanovana mpamatsy na drafitra. Raha tsy fahadisoan'ny mpitatitra anao (ary ny ankamaroan'ny fotoana tsy anisany) dia fotoana tokony hijerena ireo rindrambaiko iPhone.
2. Hanavao ny rindrambaiko iPhone sy ny fikirakira ny mpamatsy anao
IPhones maro Nilaza ny olona fa tsy nanana Serivisy aorian'ny famoahan'ny Apple ny iOS 8. Na dia efa namboarina ela be aza io olana io dia misy fanamboarana marobe hatrany amin'ireo fanavaozana iOS ho an'ireo bibikely tsy dia mahazatra loatra izay mety hiteraka olana 'Tsy misy Serivisy'. Afaka miroso amin'ny iray amin'ireo fomba roa ianao:
ny findaiko tsy mifandray amin'ny internet
Raha afaka mifandray amin'ny Wi-Fi ianao , azonao atao ny manamarina raha misy fanavaozana rindrambaiko azo alaina ho an'ny iPhone ao amin'ny Fikirana> Ankapobeny> Fanavaozana ny lozisialy .
Raha tsy misy fanavaozana iOS azo alaina, mankanesa any Fikirana> ankapobeny> Fampahalalana mahita iray fanavaozana ny toeran'ny mpitatitra ny serivisy an-tariby. Tsy misy bokotra hijerena ireo fanavaozam-baovao ireo: mijanona fotsiny amin'ny pejy 'Momba ny' 10 segondra eo ho eo, ary raha tsy misy ny miseho dia havaozina ny toe-pitaterana anao.
Raha tsy manana fidirana Wi-Fi ianao , ampifandraiso amin'ny solo-sainanao ny iPhone-nao ary ampiasao iTunes na Finder (amin'ny Mac ihany miaraka amin'ny Catalina 10.15 na kinova vaovao) raha hijery raha misy fanavaozana rindrambaiko azo alaina ho an'ny iPhone-nao. Hanontany anao ho azy izy raha te hanavao ny iPhone ianao raha misy fanavaozana misy. iTunes sy Finder dia manamarina ho azy ireo ihany koa ny fanavaozana ny fipetrahan'ny mpitatitra, ka raha misy manosika azy dia tsara ny manavao azy io ihany koa.
Raha milaza ny iPhone-nao fa tsy misy serivisy aorian'ny nanavaozanao ny rindrambaiko, na raha toa ka tsy misy daty ny rindrambaikoo dia tonga ny fotoana hisitrika sy hamahana olana sasany.
3. Avereno ny toe-javatra misy ny tamba-jotra
Ny famerenana amin'ny laoniny ny fikirakira tamba-jotra ao an-tranonao dia afaka manamboatra karazana olana mifandraika amin'ny sela sy Wi-Fi amin'ny iPhone. 'Manadino' ny tamba-jotra Wi-Fi rehetra anao ity, ka tsy maintsy hifandray amin'izy ireo ianao ary hiditra indray ny teny miafin'ny Wi-Fi. Ny olana 'Tsy misy serivisy' dia mety hiala aorian'ny famerenanao ny iPhone.
Raha hamerina ny fikirana tambajotra dia sokafy Fikirana> Ankapobeny> Reset> Reset fikirana tambajotra . Ampidiro ny passcode iPhone-nao, avy eo tap Avereno ny fametrahana ny tambajotra rehefa mipoitra eo akaikin'ny faran'ny efijery iPhone anao ny popoka fanamafisana.
4. Zahao ireo toe-javatra Cellular Data an'ny iPhone
Betsaka ny fikirakirana angona finday ao amin'ny iPhone anao, ary raha misy zavatra tsy voalamina tsara dia afaka milaza ny iPhone fa tsy misy serivisy. Ny fanovana dia azo ovaina tsy nahy, ary indraindray ny olana dia azo alamina amin'ny famonoana fotsiny ny iPhone sy famerenana azy.
Ny olana amin'ny famaritana ireo fikirana ao amin'ny iPhoneo dia izay hitanao ao Fikirana> Ny data finday dia miovaova arakaraka ny mpandraharaha iray mankany amin'ny iray hafa . Raha tsy hitanao ny fikirana lazaiko ato amin'ity fizarana ity dia mandehana amin'ny sosokevitra manaraka: tsy mila manao na inona na inona ianao. Ireto ny soso-kevitro:
Midira ao amin'ny Fikirana> Data finday ary alao antoka fa Tahirin-kevitra finday dia navadika. Raha izany dia manandrama mamono azy hatrany.
Mandeha Fampahalalana finday> Safidy> Fandehanana ary alao antoka fa Mandeha feo dia navadika. Ny roaming feo dia tokony alefa ho an'ny ankamaroan'ny olona any Etazonia. Ny mpandraharaha dia tsy manome vola amin'ny fivezivezena amin'ny finday toy ny taloha. Raha liana ianao, ny iray amin'ireo mpanoratra dia nanoratra lahatsoratra manazava ny fomba miasa ny feo sy ny roaming data amin'ny iPhone-nao . Doka iray - Mety ny tsy hanajanonana ny fivelezana feo rehefa mandeha iraisam-pirenena hialana amin'ny faktioran-telefaona lafo rehefa mody ianao.
Mandeha Fikirana> Data finday> Fifidianana tambajotra ary mampiato ny safidin'ny mpandraharaha mandeha ho azy. Mety hitsahatra tsy hiteny ny iPhone misy anao raha tsy misafidy tanana izay tambajotra finday hifandraisanao. Mpamaky maro tsy hahita izy ireo ity safidy ity amin'ny iPhone, ary ara-dalàna tanteraka izany. Mihatra amin'ny mpamatsy tambajotra sasany ihany izy io.
Ny karatra SIM an'ny iPhone dia mampifandray ny iPhone amin'ny tamba-jotra finday. Io no mampiavaka ny mpitondranao ny iPhone amin'ny olon-drehetra. Indraindray ny iPhone-nao dia hitsahatra tsy miteny hoe Serivisy fotsiny amin'ny fanesorana ny karatra SIM amin'ny iPhone-nao ary mamerina azy ao anatiny.
Raha tsy azonao antoka ny fomba fanesorana ny karatra SIM anao dia vakio ny dingana 1-3 ao amin'ny lahatsoratro amin'ny maninona ny iPhones no miteny hoe 'No SIM' indraindray . Mba hanesorana ny karatra SIM dia azonao atao izany
Nilaza i iphone fa ampidirina an-telefaona ny telefaona raha tsy izany
Raha miteny foana ny iPhone hoe 'tsy misy serivisy' rehefa avy namaky ny lahatsoratro hafa dia miverena eto ary tohizo amin'ny dingana manaraka.
6. Jereo raha simba ny rano
Mora ny mahatakatra ny antony mety hilazan'ny iPhone hoe 'Tsy misy serivisy' raha tapaka, fa ny fahasimban'ny rano dia mety tsy hita maso ary manimba . Raha nanomboka nilaza ny 'iPhone tsy misy serivisy' ny iPhoneo rehefa avy lena, betsaka ny mety ho fahasimban'ny rano no olana.
Apple tsy manamboatra iPhones simba-drano, fa soloiny. Raha manana AppleCare + ianao, ny vidin'ny fanoloana iPhone simba dia kely fotsiny raha oharina amin'ny vidiny raha tsy manao izany ianao. Raha mitady safidy hafa tsy lafo ianao dia jereo ilay faritra Safidy fanamboarana avy eo.
7. Backup ary avereno amin'ny laoniny ny iPhone, fa vakio aloha ny fampitandremana!
Ny fanaovana kolikoly amin'ny lozisialy dia mety miteraka olana isan-karazany amin'ny iPhoneo, avy amin'ny fanariana bateria be loatra mandra-pahatongan'izay lasa mafana be ny iPhone-nao. Aza hadino izany backup ny iPhone amin'ny iTunes na iCloud raha misafidy ny hanohy ianao, satria ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone dia hamafa ny zava-drehetra inona no ao.
Doka iray tena ZAVA-DEHIBE
Famerenana amin'ny laoniny ny iPhone rehefa tsy afaka mifandray amin'ny tambajotra finday dia mampidi-doza tokoa , noho io antony io: iPhone eFA tsy maintsy alefa alohan'ny hampiasana azy aorian'ny famerenana amin'ny laoniny. Raha averinao amin'ny laoniny ny iPhone-nao ary mbola miteny hoe Tsy misy serivisy dia tsy hampiasaina tanteraka. Tsy ho vitanao izany tsy misy na inona na inona: tsy ho afaka hamerina amin'ny laoniny ny iPhone-nao ianao, tsy ho afaka hampiasa ny rindranasao mihintsy .
Raha manana finday nomaniny ho solon'izay misy ianao ary vonona ny handray ny risika dia avereno amin'ny laoniny ny iPhone afaka hamaha ity olana ity fa tsy misy antoka. Tsy mamporisika anao aho hanandrana hamerina ny iPhone raha tsy hoe manana Apple Store eo akaiky eo ianao.
8. Mifandraisa amin'ny mpamatsy anao na amboary ny iPhone
Indraindray ny kaoperativa dia manana kaody fampahavitrihana manokana izay afaka mamaha ny olan'ny iPhone amin'ny serivisy. Ireo kaody ireo dia miova matetika ary be loatra ny mpitatitra ka tsy mila lisitra kaody manokana eto, fa misy ny fahafahan'ny mpitatitra manampy anao amin'ny telefaona. Raha tsy mandeha izany dia halefan'ny mpitondra anao any amin'ny Apple Store ianao ho an'ny teknisianina hamantatra ny iPhone.
iphone 6 tsy mitsaha-miasa
Raha misafidy ny handeha any amin'ny Apple Store ianao, dia hevitra tsara dia tsara ny miantso mialoha na mandeha amin'ny Internet mba hanao fotoana amin'ny teknisianina alohan'ny hahatongavanao. Mety hiafara mandritra ny fotoana maharitra ianao (na mividy Mac vaovao) raha tsy manao izany.
Raha te-hihary vola ianao, hanin-kotrana Mandehana any amin'ny toerana nofidinao, amboary ny findainao anio ary omeo antoka ny asanao mandritra ny fiainana.
Soso-kevitra sy vahaolana
Iray amin'ireo vokatra lehibe ateraky ny iPhone milaza fa tsy misy serivisy dia ny fanombohan'ny bateriao haingana be. Raha mitranga aminao izany (na raha te hanatsara ny fiainana bateria amin'ny ankapobeny ianao), ny lahatsoratro ao ny fomba fitsitsiana bateria iPhone afaka manisy fiovana lehibe izany.
Raha tsy vao sambany ianao no sendra ilay olana 'Tsy misy serivisy' ary leo ianao, zahao ny sarintany fandrakofan'ny mpandraharaha avy amin'ny UpPhone na ampiasao ny fitaovana fampitahana drafitra mba hahitanao hoe ohatrinona ny vola azon'ny fianakavianao atao amin'ny alàlan'ny fifindrana amina mpanome tolotra telefaona hafa.
20 taona lasa izay, ny fitarainana momba ny tsy fahafahantsika manao antso an-tariby na avy aiza na aiza misy antsika dia azo jerena ho 'olana manankarena', saingy niova ny zava-drehetra ary ny fahafahantsika mifandray hatrany dia zava-dehibe amin'ny fiainantsika andavanandro. Tao amin'ity lahatsoratra ity dia nianatra ianao hoe nahoana ny iPhone no miteny hoe Tsy misy serivisy ary ahoana ny fomba fanamboarana azy. Tiako ny hahafantatra izay vahaolana niasa tamin'ny toe-javatra nisy anao. Avelao ao amin'ny faritra misy hevitra eto ambany ny hevitrao.